Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo weli doona inuu Kooxda Manchester United keeno Jadon Sancho iyo Erling Haaland – Gool FM
Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo weli doona inuu Kooxda Manchester United keeno Jadon Sancho iyo Erling Haaland
Haaruun October 10, 2020
(Manchester) 10 Okt 2020. Macallinka Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa la soo warinayaa inuu weli qorsheynayo inuu labada xiddig ee Borussia Dortmund, Jadon Sancho iyo Erling Braut Haaland keeno garoonka Old Trafford.
Red Devils ayaa si xoog leh loola xiriirinayey Haaland suuqa kala iibsiga xiddigaha bishii Janaayo, laakiin xiddiga xulka qaranka Norway ayaa doortay inuu ka soo tago Red Bull Salzburg, isla markaana uu ku biiro Dortmund.
20-sano jirkaan ayaa dhaliyey 21 gool 23 kulan oo uu saftay tan iyo markii uu yimid naadiga BVB, waxaana uu garoonka Signal Iduna Park uu kaga tagi karaa Adduun dhan 75 milyan oo euro oo u dhiganta 68 milyan oo gini xagaaga 2022-ka.
Sida ay warinayso shabakadda ESPN, Solskjaer ayaa wali u arkaa Haaland bartilmaameedka ugu horreeya ee suuqa kala iibsiga, halka si la mid ah loo oran karo Sancho inkasta oo Man United ay wayday heshiis xagaagii ay ku doonaysay xiddiga reer England.
Da’yarkii hore ee Kooxda Manchester City ayaa ahaa bartilmaameedka kooxda ee suuqii dhowaa, laakiin Dortmund ayaa diiday inay hoos u dhigto qiimaha ay ku doonaysay oo ahaa 108 milyan oo gini.
Liverpool iyo Bayern Munich ayaa la sheegay inay labadoodaba ku soo biirayaan loollanka loogu jiro Sancho xagaaga soo socda, inkastoo Real Madrid loo malaynayo inay u aragto Haaland bedelka muddada dheer ee Karim Benzema.
Man United ayaa xaqiijisay heshiisyada Edinson Cavani, Alex Telles iyo Facundo Pellistri maalintii ugu dambaysay, halka Amad Diallo uu si rasmi ah kooxda ugaga soo biiri doono Atalanta BC bisha Janaayo ee horraanta sanadka cusub 2021.
Kooxda Manchester City oo loo tilmaamay Tababare ka wanaagsan Macallin Pep Guardiola oo ay tahay inaan looga hormarin saxiixiisa